Kismaayo News » Yuusuf Garaad, wasiirka isaga wariyaha isu ah !
Yuusuf Garaad, wasiirka isaga wariyaha isu ah !
Kn: Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar oo horey u ahaa saxafi rug cadaa ah ayay u egtahay in xirfadiisii hore si weyn oga faa’iideysanayo xiligan uu wasiirka yahay.
Wasiirka oo bilihii hore lagu dhaliilay waxqabad la’aan, ayaa dhawaanahan u muuqda in uu shaqadiisa si wanaagsan u qabsanayo, sidoo kalana waxqabadkiisa isaga soo bandhiganaya.
Yuusuf ayaa si joogto ah maqaal ugu qora bog uu leeyahay, halkaasi oo uu faahfaahin kaga bixiyo hadba talaabada wanaagsan ee uu qaaday, waliba si xog-ogaalnimo ku jirto.
Yuusuf uma baahna wariye gaar ah oo safarada ku wehliya iyo waliba afhayeen ay wasaarada yeelato, xitaa inta badan ma ogolaado in uu bixiyo waraysiyo uu siiyo warbaahinta madaxa banaan, taasi badalkeeda isaga ayaa tartiibtiisa warkiisa xariiqda, saxaafadana waxa ay markasta ku qasbantahay in ay xigato waxa uu soo qorey.
Maqaalkii ugu dambeeyey waxa uu ka qorey socdaalkii uu ku tagay dalka Hindiya iyo heshiis uu soo galay, waxaadna ka akhrin kartaa xagga hoose.
Heshiis Soomaaliya iyo India
Dowladda Soomaaliya iyo Dowladda India ayaa maanta heshiis ku kala saxiixday caasimadda India ee New Delhi.
Arrimaha kale marka laga soo tago heshiiskani wuxuu u saamaxayaa Dowladda Soomaaliya in iyada lagu soo wareejiyo 118 maxbuus oo loo heysto dembiyo la xiriira burcad badeed oo hadda ku jira xabsiga Taloja ee magaalada Mumbai ee dalka India ka dib marka uu xukun ku dhaco.
Heshiiskaasi wuxuu qorayaa in maxaabbiistaasi ay xukunka ku dhammeystaan dalkooda si ay ehelkooda iyo saaxiibbadood ay u soo booqan karaan.
Midkii raba in xukunkiisa dib u eegis lagu sameeyo sida uu heshiisku qorayo waxaa go’aanka dib u eegista leh Dowladda India.
Laakiin haddana waxaa uu heshiisku qorayaa in labada Dowladooda ee Soomaaliya iyo India ay mid kastaa iskeed cafis ugu fidin karo maxaabbiista iyada oo waafijneysa shuruucda dalkeeda.
Maxaabbiista Soomaaliyeed ee India ku xiran oo dacwaddooda la qaaday, waxaa la filayaa 15-ka ugu horreeya in Maxkamad ku taalla Mumbai ay berry ku dhawaaqi doonto xukunkooda.
Aniga iyo xubnaha kale ee wafdiga Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Xeer Ilaaliyaha Qaranka, Axmed Cali Daahir iyo mas’uuliyiin Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ay ka mid tahay Danjiraha Soomaaliya ee New Delhi, Ebyan Maxamed Saalax (Ebyan Ladane) berri ayaan u amba bixi doonnaa magaalada Mumbai.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan inta gacan ka geysatay daba socodka howshan, diyaarinta iyo dib u eegista nuqulka heshiiska, waxadaaxjoodka iyo taageerada iyo dhiirri gelinta howshaan guusha ku dhammaatay.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’iisal Wasaaraha, Ra’iisal Wasaare ku Xigeenka, Wasiirka Caddaaladda, Xasan Xaaji, oo heshiiska naga hubiyay talana ka bixiyay iyo dhammaan xubnaha Golaha Wasiirrada oo dhowr jeer su’aalo naga weydiiyay mowduuca, talo iyo dhiirri-gelin na siiyay, qaar badanna ay ballanqaadeen in ay toos uga qeyb qaataan howsha.
Waxaa kale oo aan u mahadcelinayaa Agaasimaha Aasiya ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Shirwac Cabdullaahi Ibraahim oo howshan muddo soo waday haddana ka mid ah wafdigeyga, Agaasimaha Waaxda Sharciyada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Cusmaan Abshir Cigaal oo hubiyay nuqulka heshiiska iyo Xoghayaha Koowaad Axmed Maxamuud Maxamed Xiish oo ah sarkaalka Safaaradda Soomaaliya u qaabbilsan kiiska Maxaabiista Mumbai iyo dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Xaaf ayaa isaguna fagaare Madaxweynaha Qaranku fadhiyo ku ballan qaaday in uu bixin doono kharashka dayaaradda lagu soo celinayo Maxaabbiista haddii ay Dowladdu ku guuleysato in ay India ka soo deyso.
Dhammaantood waan uga mahadcelinayaa iyaga iyo inta kale ee samaddoonka ah ee mar warlba howshan nagu garab taagnaa.